तस्करीको साढे ३३ केजी सुनले यसरी लियो तीनको ज्यान - inaruwaonline.com
तस्करीको साढे ३३ केजी सुनले यसरी लियो तीनको ज्यान
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०१, २०७५ समय: ९:४१:५६
काठमाडौं, १ वैशाख । तस्करीको साढे ३३ केजी सुन काण्डमा तीनको ज्यान गएको छ । एकको हत्या भएको छ भने दुईले आत्महत्या गरेका छन् । मोरङ उर्लाबारी–७ का ३३ वर्षीय सनम शाक्यको हत्या भएको एक महिनापछि अन्य दुईले आत्महत्या गरेका हुन् । तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका प्रेमलाल चौधरीले शुक्रबार आत्महत्या गरे ।
नेपाल एयरलाइन्सका लोडर चौधरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा थिए । अर्का आरोपी सानु बनले पनि केही दिनअघि प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरेका थिए । तर, प्रहरीले बन आत्महत्याको घटना गोप्य राखेको छ । उनी थाई एयरवेजका इन्जिनियर थिए ।
कहाँ छ साढे ३३ केजी सुन ?
साढे ३३ केजी सुन तस्करी काण्डमा जोडिएर तीनजनाको ज्यान गइसकेको छ । तर, उक्त सुन कोसँग कहाँ छ अझै खुल्न सकेको छैन । न सुन ल्याउन लगाउने समातिएका छन्, न पठाउने व्यक्तिको पहिचान नै खुल्न सकेको छ । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार गायब भएको भनिएको साढे ३३ केजी सुन गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीको हो । तर, उनलाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । पछ्याउँदै जाने क्रममा उप्रेतीले सुन स्टोर गर्ने गरेको कोठा भने फेला प-यो । उक्त कोठा नयाँ वानेश्वरस्थित एक घरमा छ । तर, प्रहरीले त्यहाँ पनि सुन भेट्टाएन । तस्करीमा जोडिएका १८ जनालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
साढे ३३ केजी सुनसँग जोडिएर सनम शाक्यको हत्या भयो । तर, प्रहरी घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती समाउन असफल बन्यो । त्यसवेला उक्त सुन रसुवाको केरुङ नाकाबाट ल्याइएको भनिएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान माथि नै प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छुट्टै टोली गठन ग¥यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त सुन केरुङ नाकाबाट नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको खुल्यो । त्यसपछि अनुसन्धान एयरलाइन्सका कर्मचारीतर्फ मोडियो । यही क्रममा नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयरवेज र फ्लाई दुबईका कर्मचारी पक्राउ परे । उनीहरूकै बयानका क्रममा अहिले न्युरोडका सुन व्यापारी पनि पक्राउ परेका छन् ।
चौधरी र बनले किन गरे आत्महत्या ?
प्रहरीले चौधरीसहित सोही एयरलाइन्सका हेड लोडर राजन थापालाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले मोबाइल नियन्त्रणमा लिएपछि उनमा चिन्ता बढ्दै गयो । सँगै पक्राउ परेका थापासँग उनले ‘अब जेल जाने भइयो’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्थे । हिरासतमा राखिएको तीन दिनमै उनले ट्वाइलेटको ढोकाको कब्जामा सुरुवालको पासो बनाएर आत्महत्या गरे ।
प्रहरीका अनुसार अर्का आरोपी सानु बन पनि सुरुमा निर्धक्क नै थिए । जब उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर भाइबर र फेसबुक अकाउन्ट हेरियो, त्यसपछि हतास बने । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनले हिरासत कक्षमै आत्महत्या गरेका हुन् । चौधरीसँगै पक्राउ परेका थापालाई भने थप अनुसन्धानका लागि शुक्रबारै मोरङस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।